Petra Kvitova oo lix bilood ka maqnaan doonta tayniska - BBC Somali
Petra Kvitova oo lix bilood ka maqnaan doonta tayniska
Image caption Qayb dhismahan ka mid ah ayaa lagu weeraray Petra
Petra Kvitova oo ah gabadh labo jeer ku guulaysatay koobka qaaliga ah ee Wimbledon ee ciyaarta tayniska ayaa ugu yaraan lix bilood ka maqnan doonta tayniska iyada oo ka soo kabanaysa dhaawacyo ka soo gaaray weerar mindi oo lagu qaaday, balse waxaa la filayaa in ay xirfadeeda sii wadan doonto mustaqbalka.
Gabadhan oo u dhalatay dalka Czech oo 26 jir ah ayaa qalliin laga sameeyay gacantii ay ku ciyaaraysay ka dib markii qof uu ku weeraray mindi iyada oo ku sugan gurigeeda oo ku yaalla magaalada Prostejov Talaadadii.
Petra ayaa sariirta jiifi doonta 14 maalmood si ay u nasato intaas ka dibna waxaa u sii socon doonta dawaynta.
Xulka Minnesota oo sheegay in uusan ciyaarayn, tacadiyada galmada ee loo soo jeediyay awgeed
Rooney oo ka hadlay mustaqbalkiisa ciyaaraha
Radek Kebrle oo ah dhakhtarka gabadha ayaa sheegay in qalliinkeedu uu si wanaagsan u dhacay balse ay saddex billood ku qaadan doonto xataa in ay hawaysato in ay gacanta ku qabato usha tayniska lagu dheello.
Petra ayaa sheegtay in ay nasiib leedahay haddiiba ay nooshahay oo aysan u dhimanin weerarkii Talaadadii.